Mahasalama ve ny mihinana crikety? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Sakafo Crickets - ny fomba hahatratrarana
Sakafo Crickets - ny fomba hahatratrarana
Mahasalama ve ny mihinana crikety?
Ho an'ny iray,criketydia proteinina avo, matavy ambanysakafoloharano afaka manome vitamina, mineraly ary zava-dehibe ny vatan'olombelonaara-pahasalamanamakro-otrikaina. Tsy lazaina intsony fa amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, entomophagy (fihinana bibikely ho an'nysakafo) dia ampahany mahazatra sy tena ilaina amin'ny asakafo mahasalama.
Cricket nendasina ireo ary tena matsiro. Raha toa ianao ka maro ny olona any andrefana dia mety ho somary nanento kely fotsiny ianao momba ny sakafom-pofako. Ny fahitana ny kalalao goavam-be amin'ny tahotra dia mety mandihy ao an-dohanao izao, mitsako an'Andriamanitra fotsiny.
Na dia mety manontany tena ianao aza ianao hoe maninona aho no mijery an'ity lahatsoratra ity, dia hanazava aminao aho hoe maninona no tsy dia adala ny fihinanana bibikely. Amin'ny hitsiny rehetra, ny cricket dia tsy vitan'ny hoe manandrana tsara, fa mety ho tena tsara ho anao sy ny tontolo manodidina anao koa. Ka raha tsy misy resaka hafa dia ireto ny antony dimy hihinako trondro.
Ny ampahefatry ny mponina eran'izao tontolo izao dia efa mahalala fa ny voangory dia mety ho matsiro be. Ny fihinanana bibikely dia fantatra amin'ny anarana hoe etomophagy. Bibikely no mamatsy olona manodidina ny 2 miliara isan'andro, fa tsy an-tapitrisany.
Eritrereto i Afrika, Azia ary Amerika Latina. Ny olombelona dia nandany voangory nandritra ny taonjato maro ary lasa ampahany amin'ny sakafo isan'andro eran'izao tontolo izao. Amin'ny toerana sasany dia raisina ho sakafo matsiro mihitsy aza.
Sakafo matsatso, sakafo gourmet lafo vidy izay tianao tsy hananana? Ny iray amin'ireo antony anaovanao ilay Voangory Adversity dia noho ny fanilikilihana ara-kolotsaina ny tontolo tandrefana izay azo inoana fa nipoitra nandritra ny Revolisiona momba ny fambolena rehefa noheverina ho biby fiompy ny bibikely noho ny fihinanana ireo zavamaniry, saingy tonga ny fotoana anaovana bibikely hafa mba hahafahantsika mankafy ny bitika madinidinika. vatana. Tahaka ny eran'izao tontolo izao, ny kalikety koa dia be otrikaina raha oharina amin'ny loharanon-kena nentim-paharazana ary manolotra mombamomba ny sakafo mahavelona izay manome loharanom-proteinina, vitamina ary mineraly mahia, ary ny crisety dia misy proteinina 65 isan-jato ary bibikely sasany misy proteinina hatramin'ny 80 isan-jato. Mahagaga fa ny bibikely sasany dia manana mitovy na mihoatra ny henan'omby vy ary ny crisety dia loharanon'ny proteinina feno, izany hoe misy asidra amine tena ilaina izy ireo ary manana mega-telo koa ary mega-6 asidra matavy be kalsioma ary Ny crikety vitamina B12 dia maharitra amin'ny tontolo iainana ny fiompiana biby dia iray amin'ireo mpandray anjara lehibe indrindra amin'ny fiakaran'ny mari-pana eran'izao tontolo izao, ny planetantsika dia manafana noho ny volon'omby.
Mananihany aho fa tsy sangisangy amin'ny fandehan'ny raharaha, 2050 toa mampatahotra ra. Hahita banga kely ianao. Ny crikety sy ny bibikely hafa dia safidy iray amin'ny proteinina biby ary mety ho fomba maharitra hampihenana ny vokatry ny fiakaran'ny mari-pana manerantany raha oharina amin'ireo bibikely biby fiompy, izay manana dian-tongotra kely ara-tontolo iainana satria tsy dia be loatra ny entona entona ary mampiasa rano kely dia kely ary tena kely Kavina kely dia kely kokoa noho ny proteinina biby hafa noho ny proteinina biby hafa satria bitika bitika kely ireo.
Ny dian-drano dia milaza amintsika fa ny ombivavy dia mampiasa rano 15 400 litatra ho an'ny hena 1 kilao, izay avy amin'ny rano ilaina mba hambolena ny vokatra mba hanomezana sakafo ny omby, izay mahatratra 38,6 isan-jaton'ny velaran-tany novain'olombelona, ​​dia tsotra tsy maharitra intsony satria mitombo ny isan'ny mponina ary ny crikety sy ny bibikely hafa dia tsy dia misy toerana firy noho ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona izay tena be mpahalala satria ny voanjo na ny mitovy aminy mihitsy aza araka ny nofaritan'ny popcorn, ny endrika mora azo indrindra ho an'ny ahitra maniry vao hita dia ny sakafom-boaloboka, Crickets amin'ny tany, ary afaka manampy otrikaina taonina amin'ny lovia rehetra. Azonao atao koa ny mihosotra manontolo ho sakafom-pisakafoanana sôkôla na hafafy amin'ny tsiro ankafizinao, na anao fotsiny Manampy lovia tianao.
Atsipazo amina vary nendasina izy ireo na ny crikety taco manarakao dia afaka manampy amin'ny famahanana olona mitombo efa voatendry hahatratra 9 miliara amin'ny 2050, izany tahan'ny fitomboana izany dia tsy isa azon'ny izao tontolo izao atao amin'ny zava-drehetra ankehitriny. Ny boycrickets mahafatifaty dia afaka manampy loharanom-tsakafo mora sy mahomby amin'ny sakafo izay tsy ampy proteinina sy vy any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana, ny votoatiny vy be dia be dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny iray amin'ireo otrikaina be indrindra eran'izao tontolo izao, ny Iron Deficit Anemia, ary koa ny fanomezana sakafo, afaka azon'ny zohy mivelona Azo antoka ho an'ny olona any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana Ny fiompiana bibikely dia mety hamokatra be ary tsy dia lafo amin'ny ambaratonga kely Ny bibikely mihinana amin'ny tany mandroso kokoa dia mety hitarika fiovan'ny toe-tsaina mety hisy akony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. sakana lehibe fa ny tombony azonao amin'ny famelomana tsiro sy ny zavatra mitahiry izao tontolo izao dia mety mihoatra ny fitsarana an-tendrony anananao momba ny fihinanana bibikely bebe kokoa amin'ny resako dia manana zavatra an-taonina hoan-dry zalahy ary raha sendra manao zavatra ianao dia andefaso sary aho, ampahafantaro ahy ny fandehananareo ry zalahy ary avelao ny fanehoan-kevitra etsy ambany izay misy ny eritreritrao momba ny fanaovana barbecue sy fihinanana bibikely, angamba maharikoriko anao angamba ianao dia ho tianao io misaotra anao Topy Maso Eran
Sakafo ve ny krikety?
Cricketsmisy otrikaina isan-karazany izay tena ilaina amin'ny rehetra fa indrindra ny atleta. Izy ireo dia mitondra loharanom-pahalalana mahery vaika, proteinina avo lenta, vitamina, mineraly ary asidra matavy. Fonosina miaraka amin'ireo toetra mahafinaritra rehetra ireo, tsy mahagaga izany hoe nahoanacriketynoheverina fa nyfanodinanany ho avy!
Misy cricket 15 tapitrisa eo amin'ity efitrano ity eto dia hiaina malalaka ny fiainany izy ireo mandra-pahatonga azy ireo ho sakafo Ny tanjon'ny condo dia ny hanomezana fialofana ho an'ny zohy ary noho izany dia miala sasatra amin'ny condo izy ireo ary handray rano kely izy ireo. , zavatra hohanina ary avy eo miverina any am-pandriana Sarotra ny milaza hoe firy ny crikety ao anaty efitrano toa an'io satria izy rehetra dia nipetraka tao amin'ny condo kely nahafinaritra azy ireo, mazava ho azy, vovoka azo ampiasaina toy ny lafarinina, tsara, ianao tsy afaka manandrana azy akory ianao na afaka mikororoka azy toy ny chips ihany, ity misy tsiro barbecue ity, na dia mety hieritreritra aza ianao fa safidy hafahafa io satria ny barbecue dia tena misy proteinina kokoa noho ny hen'omby nefa tsy misy fahasimban'ny tontolo iainana ataon'ny mpanamboatra sy ny mpandraharaha. ho an'ny loharanom-proteinina azo antoka sy maharitra kokoa hanampiana ny vokatr'izy ireo ary ho anay w ar es q Tombontsoa lehibe ho an'ny orinasanay vokatr'izany, nandeha tany amin'ny toeram-piompiana entomo any Canada izahay mba hahitana ny fomba nanamboaran'izy ireo ny cricket amin'ny brunch bugto. afaka mamelona mponina 9 na 10 miliara amin'ny planeta feno olona isika izao, mioty krikety 50 tapitrisa isan-kerinandro eo ho eo ary mikendry ny famokarana telo heny ao anatin'ny herintaona. Araka ny efa fantatrareo, tsy mbola nisy olona nanao fambolena qriket maimaimpoana tamin'ity ambaratonga ity talohan'ny nanombohany teto izay nisorohan'ny zana-kazo ny zana-kazo niaraka tamin'ny fangaro tanimanga ary norakofana pie fotaka môtô ary nanatody ireo vehivavy bevohoka. fa raha ny tena izy dia angamba misy kirikety an'arivony sy an'arivony ao ary ao amin'ilay efitrano eo ho eo. Atody 15 tapitrisa amin'ny karazany 900 samihafa izay azon'i Darren nofidiana.
Nisafidy ny cricket tropikaly izy noho ny sakafo takiana tsotra ilain'izy ireo dia ny cricket izay tsara amin'ny toerana avo, maniry ell tsara tarehy ary matsiro. Ny ampahany tsirairay amin'ity cricket ity dia azo hanina ary misy otrikaina toy ny vy sy kalsioma aorian'ny sivy andro atody atody ary mihantona any an-tsekoly mandritra ny tapa-bolana mba hiatrehana ny fiainana ao amin'ny efitrano malalaky ny zaridaina, avy eo entintsika manomboka any amin'ny akanin-jaza ka hatramin'ny fitomboana. efitrano, mila ekipa dimy fotsiny aho mba hitazomana ity zanatany an-tapitrisany ity. Ny trondro eto dia mihinana fehezan-katsaka sy rongony vitsivitsy Ny crickets dia mihinana salan'isa manodidina ny arivo kilao isan'andro matetika manaitra ny sain'ny olona satria manao qrikets ianao dia biby kely toy izany nefa mazava ho azy fa mandany azy rehefa manana 10 na 15 tapitrisa amin'izy ireo ianao, vodin-tsakafo sahaza hametrahana azy amin'ny fomban'olombelona. Cricket 15 tapitrisa dia saika in-droa ny isan'ny tanànan'i New York, fa ny fitomboan'ny trondro rehetra dia mbola maharitra kokoa noho ny fiompiana akoho amam-borona na omby hen'omby Mamokatra iray kilao fotsiny kamitakes dia mamokatra rano 22000 litatra tsy mampino ary mitovy ny isan'ny proteinina avy amin'ny cricket.
Cricket an-jatony litatra vitsivitsy monja dia manana tombony hafa koa. Ka ny zavatra mahaliana momba ny bibikely dia tena vitsy ny aretina azo avy amin'ny bibikely mankany amin'ny olombelona, ​​izay tsy mitovy amin'ny biby mampinono na kirikira akoho amam-borona, tsy misy viriosy fantatra, na ny karazana vokarintsika dia tsy manana viriosy fantatra azon'izy ireo atao mamindra azy ireo, ary mazava ho azy fa tsy misy virus na virus zoonotic afaka miampita karazana. Ireo trano fivarotana Entomo telo dia afaka mamokatra proteinina 9000 pounds isan-kerinandro mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny proteinina manodidina ny 80.000 olona ary ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia mampiditra azy io amin'ny vokatra vita toy ny sakafon'ny alika, ny alika amin'ny alika na mivarotra azy ho vovo-cricket ambanin'ny marika iray hafa na apetraka amin'ny zavatra toy ny mixie superie malama, manendasa azy amin'ny mofo voaendy hafa sy tsakitsaky hafa, eny fa na ny tain-drorohany aza dia vokatra azo ary araka ny ahitanao ny ambany dia rakotra zezika cricket antsoina hoe frass ary tena tsara zezika.
Ny voly dia afaka mamokatra zezika manodidina ny enina kilao isaky ny vokatra. Ny mahasamihafa azy dia enina herinandro ny cricket dia matotra tanteraka, nandany ny fiainany ny atodiny nakarina sy napetraka ho antsika, ary maty tokoa izany rehefa afaka andro vitsivitsy ary izao dia tonga ara-potoana ny mahita azy ireo nivadika ho sakafo ka izao no ny efitrano fandraisanay manta, ny crikety rehetra dia avy amin'ny bibikely fiompiana dia arofina ary alahatra mba tsy hisy sisa tavela amin'ny toeram-piompiana ao anaty fangaro izay zaraina mitovy amin'ny lovia ary vonona ny hanendasana atosika ao anaty lafaoro ka ny vovo-tany dia tokony ho ambanin'ny isan-jato isan-jato. hitantsika fa tena sarotra ny manoto, raha eo amboniny dia toa ny kafe no fenoina anaty boaty 25 pounds isan'andro, izy ireo dia mamadika Cricket 15000 ho 500 pounds ho an'ny vovo-dronono 500 kilaometatra tokoa ny saosy miafina. Tsy marina izany hoe ahoana ny fametrahana anao vita amin'ny proporsiahinao ltnis atody ambonin'ny ny fahana ary io dia karazana recipe goavambe ary tokony ho lavorary avokoa izy io mba hiasa amin'ny fomba fiasantsika fa mbola misy toerana azo hatsaraina. Amin'izao fotoana izao ny fizotrany amin'ny entimo dia manual ary mila miova izy ireo raha te hampiakatra avo efatra heny ny famokarana vitantsika izao, antenaina fa ny toeram-piompiana entomo dia hanampy amin'ny fanapahana ny vidiny ihany koa ary hahatonga ny vokatr'izy ireo ho mora vidy kokoa.
Izay sahirana atrehintsika any Azia Cricket dia efa sakafo malaza ary matoky i Daryn fa vao mainka hampientanentana kokoa ny filan'ny trondro ny fiompiana bibikely dia ny mpampitombo ny haingam-pandeha isaky ny cricket mametraka atody 600 eo ho eo ary amin'ny tranga krizy, raha isika mila izany mba hampitomboana ny famokarana, vitantsika ny tena haingana
Fa maninona no feno proteinina be ny cricket?
Cricketsmanome sakafo fenoproteininasatria voajanahary ao anatiny ny fifandanjan'ny asidra amine ilaina sy tsy ilaina. 30g Aketta natsatsika no manome anao 20gproteinina. Ampitahao amin'ny hen'omby izany, izay manome anao 8g fotsinyproteinina.
Bibikely inona no proteinina avo indrindra?
Kely ve ny akondro?
Ny etona mahazatra indrindra amin'ny bibikelyfartsdia hidrogen sy metana, izay tsy misy fofona, hoy i Youngsteadt. Ny bibikely sasany dia mety mamokatra gaza maimbo, saingy tsy dia misy fofona loatra, raha oharina amin'ny habetsahan'ny gazy resahina.AzaBugs rehetraHafainganana? Tsia.
Be proteinina ve ny Crickets?
Vita avy amin'ny tanycrikety,lalao cricketlafarinina na marimarina kokoa, vovoka dia tenabe proteinina. Raha ny marina, ny fikarohana dia mampiseho izanycricket proteininaazo ampitahaina amin'nyproteininany tratran'ny akoho tsy misy hoditra. Satriacriketydia manodidina ny 58 ka hatramin'ny 65 isan-jatoproteininaisaky ny bibikely.
Manankarena proteinina ve ny Cricket?
Crickets diamanankarena amin'ny proteinina
Ny antony lehibe mahatonga ny olona hampiasa cricket ho loharanon-tsakafo dia satria izy ireomanan-karenaamin'ny otrikaina maro, indrindraproteinina. Raha ny marina, ny fanadihadihana iray tamin'ny taona 2020 dia nahitana fa ny ankamaroan'ny zohy fihinana dia manana avo kokoaproteininaatiny noho ny miorina amin'ny biby mahazatra kokoaloharanom-proteinina, toy ny osy, akoho ary henan-kisoa (1).6 2021.
Salama ve ny vovo-proteinina Cricket?
Ny biby no loharanon'ny sakafo tsara indrindra an'ny B12. Serivisy iray an'nyvovoka proteinina cricket, ohatra, dia misy 80% an'ny RDA. Miaraka amin'ny B12,cricket proteininadia loharano tsara vitamina B2 (riboflavin) sy vitamina B7 (biotin) koa. Riboflavin sy hoditra biotin dia manohana ny hoditraFAHASALAMANA, izay zava-dehibe amin'ny ankamaroan'ny olona.8. 2019.
Feno proteinina ve ny bibikely?
henaproteinina.Bibikelymety ho loharano mahomby kokoa azaproteininanoho ny biby. Ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny European Journal of Clinical Nutrition dia mampiseho izanybibikelymisy sanda eo anelanelan'ny 9.96 sy 35,2 grama an'nyproteininaisaky ny 100 grama, raha oharina amin'ny 16.8-20.6 grama ho an'ny hena.09.22.2020
Bibikely feno proteinina ve ny bibikely?
Ny salanisabibikelymanodidina ny antsasaky nyproteininaamin'ny lanja maina, miaraka amin'ny sasanybibikely(toy ny valala) hatramin'ny 75%proteinina.
Inona avy ireo tombontsoa ara-tsakafo ateraky ny trondro?
Ny sandan'ny sakafo mahavelom-bolo dia feno proteinina, vitamina ary mineraly. Zahao ny tontolon'ny sakafo feno momba ireo vovo-dronono sy lafarinina cricket eto ambany. Fa maninona ny Cricket? Ny kitrokely dia loharanon'ny proteinina sy sakafo mahavelona. Ny fihinanana bibikely dia tsy hevitra vaovao, fa nataonay izay tsara kokoa noho izy manana vokatra sy tsiro feno.
Inona no karazana lanja mahavelona ananan'ny cricket?
Ankoatry ny chitosan sy ny proteinina, ny crickets dia misy asidra amine tena ilaina, Omega-3, Omega-6, B12 ary maro hafa. Vakio bebe kokoa ny sakafo mahavelona vokatra. Ity marika ara-tsakafo ity dia avy amin'ny iray amin'ireo lafarinina Cricket: vokatra azo avy amin'ny vovoka Cricket Pure 100%.
Inona ny sandan'ny sakafo mahavelona ny vovo-proteinina cricket?
Ny fahazoana ny sanda ara-tsakafo cricket dia ampahany lehibe amin'ny fampahalalan'ny olona ny tombontsoa azo avy amin'ny fisafidianana proteinina cricket. Ary koa, ny mpamaky lanja mavesatra dia matetika manontany raha misy vovoka proteinina cricket misy BCAA na asidra amine am-perinasa izay singa mivarotra amin'ny vokatra vovoka proteinina malaza.